कोरियामा र फोन कल कसरी गर्ने कोरियाको सियोल
कोरियाबाट र फोन कल कसरी गर्ने
पोस्ट Gyopo Tacticool Oppa पुनः लोड भयो | जीवन रक्षा मार्गनिर्देशन | 0
कोरियामा फोन कल गर्दै, कोरिया, वा कोरियाबाट। स्नातक डिग्री र ब्याट्री समावेश छैन।
कोरियामा आएका मानिसहरूले सोधेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको फोन कलिंगको बारेमा हो। म मेरो देशबाट कोरियामा भएको व्यक्तिलाई कसरी बोलाउने वा कसरी कोरिया बाहिरका मानिसहरूलाई बोलाउने? अधिकांश समय, तपाई सेलफोनको साथ कल गर्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईंले आफ्नो सेल फोन घरबाट ल्याउनुभयो भने, यो अझै पनि प्राय जसो केसहरूमा काम गर्दछ, तर तपाईंलाई सिम कार्ड चाहिन्छ। भाग्यवस, तपाईं दक्षिण कोरियामा सिम कार्डहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले घरबाट आफ्नो सेलफोन ल्याउनुभयो भने, यो राम्रो विचार हुनेछ सेलफोन रोमि service सेवा बन्द गर्नु, र राम्रो कारणका साथ। यदि तपाईंले आफ्नो देशहरूको मोबाइल डाटा योजनाबाट रोमि service्ग सेवा प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय शुल्कको साथ बिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफैंले एउटा सेलफोनको बिल आफ्नो क्यारियरबाट होल्डिंगमा भेट्न सक्नुहुनेछ घर सयौंको लागि यदि हजारौं डलरको छैन।
सेलफोनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज सिम कार्ड हो। सिम कार्ड भनेको के हो?
सिम कार्ड स्पष्टीकरण गरियो
सिम कार्ड एउटा सानो माइक्रोचिप कार्ड हो जुन तपाईंको सेल फोनमा जान्छ। यसलाई ग्राहक पहिचान मोड्युलको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसले डाटालाई प्रयोगकर्ता पहिचान, स्थान, नेटवर्क प्राधिकरण डाटा, व्यक्तिगत सुरक्षा कुञ्जीहरू, पाठ सन्देशहरू, र सम्पर्क सूचीहरू राख्छ। यो तपाईको सेल फोनका लागि अद्वितीय पहिचानकर्ता हो।
सिमकार्ड बिना नै तपाईको फोन अझै पनि एक राम्रो पेपरवेट वा निन्जा फोन हुन सक्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत सिम कार्ड लिन र अर्को फोनमा राख्न र फोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कलले काम गर्दछ यदि तपाईं एक देशको मोबाइल क्यारियर भित्र हुनुहुन्छ जुन तपाईं सिम कार्ड किन्नुभयो। वा तपाईं विभिन्न देशहरूबाट सिमकार्ड किन्न सक्नुहुनेछ र एउटा फोनमा राख्न सक्नुहुन्छ। केवल सम्झनुहोस्, यदि तपाईं सिम कार्ड किन्नुभएको देशमा हुनुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय फोन कल गर्न अर्को सिम कार्ड किन्नु आवश्यक पर्दछ।
फोनहरूलाई सिम कार्ड चाहिन्छ किनभने यसले फोनलाई फोन नेटवर्कमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। दक्षिण कोरियामा, अग्रणी तीन मोबाइल क्यारियर अपरेटरहरू एसके टेलिकम, एलजी यू + र ओलेह हुन्। तिनीहरू 3G जी, G जी, र पछि G जी सेलुलर नेटवर्क जडान प्रदान गर्दछ। मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट, म सिफारिश गर्दछु एसके टेलिकम वा ओलेलेह।
मैले सिंगापुर, भियतनाम, दक्षिण कोरियामा सिम कार्ड किनेको छु र प्रत्येक सिम कार्ड प्रयोग गरेको छु जब म त्यस देशमा थिएँ। जब म भियतनाममा रहें, मैले भियतनाममा किनेको सिम कार्ड प्रयोग गरें। सिंगापुरको सिम कार्डले भियतनाममा काम गर्दैन, भियतनामको कार्डले दक्षिण कोरियामा काम गर्दैन। मैले सिम कार्ड विक्रेतालाई मलाई मेरो Samsung Samsung Note नोटसँग उपयुक्त सिम कार्ड दिन आग्रह गरें। तपाईले त्यस्तै गर्नुपर्नेछ, तपाईको फोनको लागि उपयुक्त सिम कार्डको लागि सोध्नुहोस्। कहिलेकाँही मिल्दो सिम कार्ड हुँदैन। त्यसोभए तपाईले त्यस देश भित्र एक सेलफोन किन्नु पर्छ वा भुक्तान फोन वा होटेलबाट कल गर्नुपर्नेछ।
एक सिम कार्ड भएको एक राम्रो सुविधा
यदि तपाईंले आफ्नो सेल फोन हराउनुभयो भने, तपाईं यसलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ सेलफोन भित्रको सिम कार्डलाई धन्यवाद। एप्पलसँग एउटा अनुप्रयोग छ, "मेरो आईफोन खोज्नुहोस्" र एन्ड्रोइडसँग एक अनुप्रयोग छ जसलाई "मेरो यन्त्र फेला पार्नुहोस्" भनिन्छ, यसले आफ्नो फोनको स्थान यसको स and्केत र जीपीएसबाट फेला पार्नेछ।
सिम कार्डले kil 64 किलोबाइट्सको मेमोरीको साथ ठूलो प्याक गर्दैछ। त्यो एक हास्यास्पद सानो मेमोरी हो, आज स्मार्टफोनसँग कम्तिमा 32२ गीगाबाइटको मेमोरी छ। तर, मेमोरीको त्यो राशि सिम कार्डको लागि प्रशस्त छ।
समय क्षेत्र भिन्नता
कोरियाबाट अर्को देशमा कल गर्नु अघि पहिलो कुरा भनेको तपाईंले कल गर्नु भएको देशको स्थानीय समय थाहा पाउनु हो। तपाईं कसैलाई कल गर्न र व्यक्ति सुतिरहेको फेला पार्न चाहनुहुन्न।
दक्षिण कोरिया र जापानको समान समय क्षेत्र छ। कोरिया चीनको भन्दा एक घण्टा अगाडि छ, ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) भन्दा नौ घण्टा अगाडि र पूर्वी मानक समय भन्दा चौध घण्टा अगाडि। वा तपाईं https://www.timeanddate.com भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण कोरियाले डेलाइट बचत समय प्रयोग गर्दैन।
कोरियाबाट अर्को देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्दै:
कोरिया वा कोरियाबाट अर्को देशमा कल गर्न सजिलो छ यदि तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छ भने। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो जान्नु हो देश कोड। आधारभूत सूत्र हो:
सूत्र एक्जिट कोड + हो देश कोड + क्षेत्र कोड + फोन नम्बर। तल एउटा उदाहरण छ। अब तपाईले हेर्नु पर्छ कोरिया बाट तपाईको देश मा कल गर्न कत्ति सजिलो छ।
एक्जिट कोड - केहि कोडहरू ०००१, ००२, ०००001, ००002,, ००008००, ००00345. हुन्। तपाईको सेलुलर प्रदायक को हो निर्भर गर्दछ।
001 KT अन्तर्राष्ट्रिय कलिंग हो
००२ एलजी डाकम अन्तर्राष्ट्रिय कलिंग हो
०० Han हनारो टेलिकम इन्टरनेशनल कलि .्ग हो
०००006 एसके टेलिंक अन्तर्राष्ट्रिय कलिंग हो
०००008 अनसे टेलिकम इन्टरनेशनल कलि .्ग हो
एक्जिट कोडको लागि तपाईले कुन कोरियाली सेलुलर प्रदायक कम्पनीले सेवा पाउनु भइरहेको छ जान्नु आवश्यक छ। उदाहरण: KT ०००१ हो। मेरो LG (००२) हो।
देश कोड - सिंगापुर 65 1 हो। तपाइँ यो www.countrycode.org मा पाउन सक्नुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका १ हो। कोरिया 82२ हो। यहाँ देश कोडहरूको एक विस्तृत सूची छ।
क्षेत्र कोड - उदाहरण: सिंगापुरमा नौ क्षेत्र कोड छन्। उदाहरण को लागी 644 XNUMX बेडोक हो।
टेलिफोन नम्बर - १२123-4567।
तपाई यस प्रकारको फोनमा डायल / नम्बर प्रविष्ट गर्नुहुनेछ: ००१-001--65-१२- .644।। तपाईं त्यसपछि जडान हुनेछ र त्यो फोन नम्बरको साथ सम्पर्कमा रहनुहुनेछ।
उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका मा कसैलाई कल गर्दै
निकास कोड: 001
देश कोड: 1
क्षेत्र नम्बर: 360
फोन नम्बर: 904-3382
यो डायल गर्नुहोस्: 001-1-360-904-3382
नोट: तपाईले ड्यासहरू मात्र प्रविष्ट गर्नु पर्दैन।
याद गर्नुहोस्, तपाईले कोरिया र समय भन्दा फरक फरक विचार गर्नुपर्नेछ कोरियाबाट जहाँ तपाईं पुग्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र यसको विपरित। तपाइँको पाउनुहोस् समय क्षेत्र.
कसरी तपाईको घर बाट कोरिया लाई कल गर्ने, उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका।
सूत्र: अन्तर्राष्ट्रिय उपसर्ग कोड + देश कोड + शहर कोड + फोन नम्बर
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कोरियाको सियोलमा भएको साथीलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ। हुनसक्छ म? ठट्टा गरेको।
अन्तर्राष्ट्रिय उपसर्ग कोड - संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी ००१। यो निकास कोड हो जसले तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर कल गर्न अनुमति दिन्छ।
देश कोडकोरियाका लागि यो is२ हो
शहर कोड: सियोल को लागी, यो २ हो
फोन नम्बर:,, Digit अंक वा digit अंक।
उदाहरणका: ०११-011२-२82-2-२2345।। तपाईं ड्यासहरू प्रविष्ट गर्नुहुन्न, केवल तपाईंको फोनमा नम्बरहरू।
कोरियामा प्रमुख शहर कोडहरू तपाइँले थाहा पाउनुपर्दछ
यदि कोरिया मा शहर कोड आवश्यक छ भने, तल यसलाई फेला पार्नुहोस्। यदि तपाइँको साथी सियोल मा बस्नुहुन्छ, कोड २ छ।
डेगु 53 XNUMX
कोरिया भित्र कसैलाई कोरियामा कल गर्दै
सामान्यतया, तपाईले सेल फोन नम्बर डायल गर्नुहुनेछ किनभने आजकल बहुसंख्यक स्थानीय व्यक्तिको सेल फोन हुन्छ।
तपाईको दक्षिण कोरियामा सेल फोन छ र कसैलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ जो दक्षिण कोरिया मा सेलफोन छ। यो गर। घरेलु लामो दूरी कलहरूको लागि (सियोल बाट बुसान) प्रेस ० पहिले, १-२ अंक क्षेत्र कोड वा २-अंक सेलुलर उपसर्ग। सेलुलर पदनाम सँधै १ बाट सुरू हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईं स्थानीय कोरियाली सेलफोन नम्बर कल गर्न चाहानुहुन्छ भने ० थिच्नुहोस्, त्यसपछि मोबाइल उपसर्ग नम्बर, र त्यसपछि ग्राहक छ अंकको नम्बर।
स्थानीय कलहरूको लागि व्यक्तिको ग्राहक नम्बर डायल गर्नुहोस्। सामान्यतया, यो,, or वा आठ अंकको संख्या हो
टोल फ्री नम्बर with० बाट सुरू हुन्छ। कोरियामा टोल फ्री नम्बर डायल गर्नु अघि सधैं ० थिच्नुहोस्।
कल गर्न अन्य विधिहरू
१. ल्याण्डलाइन फोन - सेलफोन बजारमा आउनु अघि एक परम्परागत फोन। यो पारम्परिक प्रकारको फोन विधि सेलको साथ बदलियो।
२. पेफोनहरू - यी कम कोरियाभर कम भेटिन्छ किनकि प्रायः सबैजसोले सेल फोन प्रयोग गर्दछन्। तर तिनीहरू दुबै स्थानीय र यात्रुहरूका लागि एयरपोर्ट, सबवे स्टेशनहरू र कहिलेकाँही सडकहरूमा सजिलोसँग अवस्थित गर्न सकिन्छ।
यी पेफोनहरूले सिक्का, कलि calling् कार्ड र क्रेडिट कार्डहरू पनि स्वीकार गर्न सक्दछन्। केहि पेफोनले केवल सिक्का मात्र स्वीकार्छ, अरूले सिक्का लिन्छन्, र प्रीपेड कलिंग कार्डहरू (जस्तै टी-मनी) र क्रेडिट कार्डहरू, र अन्य फोनहरूले प्रीपेड कार्डहरू र क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गर्दछन्। त्यहाँ यी फोनहरूबाट स्वीकार्य भुक्तान विधिहरूको एक मानक छैन। यो स्वीकार्य भुक्तानी विधिहरूको कुनै पनि संयोजन हुन सक्छ। आज कुनै मानक छैन किनभने सेल फोन संचारको लागि मानक हो।
तपाईं पसल, मेशिन, सुविधा स्टोरहरूमा W3,000, W5,000, W10,000 को बहुसंख्यकमा प्रीपेड फोन कार्डहरू किन्न सक्नुहुनेछ। W को अर्थ वोन हो, कोरियाको मुद्राको नाम। स्थानीय कलिंग १ every० सेकेन्ड को लागी won० वटा जति हो। मोबाइल फोनमा कलहरू 70० सेकेन्डको लागि लगभग won० वोन हुनेछ। तपाईं यी प्रीपेड फोन कार्डहरूको साथ स्थानीय, लामो दूरी, र अन्तर्राष्ट्रिय कलहरू गर्न सक्नुहुनेछ।
यात्रुहरूका लागि उत्तम डेटा योजनाहरू मध्ये एक छोटो अवधिको डाटा योजना चाहिन्छ कोरियामा तीन कम्पनीहरूबाट। यी कम्पनीहरू बारम्बार यात्रीहरूबाट उत्तम वोट गरिएको छ। तपाईं तिनीहरू संग गलत हुन सक्दैन, र तपाईं घोटाला हुने छैन। तीन कम्पनीहरू हुन्:
१. ओलेह (पहिले KT)
२. एस टेलिकम
LG. LG U + (पहिले एलजी टेलिकम)
एसके टेलिकमसँग तिनीहरूको जीपीएस नेभिगेसन अनुप्रयोग छ टी-म्याप, जुन दक्षिण कोरियामा उत्तम मानिन्छ।
तपाइँसँग कार्य गरिरहेको सेलफोन पछि, Kakao कुराकानी पाउनुहोस्। यो एक स्मार्टफोन अनुप्रयोग हो जुन तपाईं Google स्टोरबाट स्मार्टफोन स्टोरहरूबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो डाटा योजनामा ​​पिग्गी ब्याक गर्दै नि: शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय फोन कलहरू प्रदान गर्ने अनुप्रयोगमा एक प्रमुख सेलफोन एड हो। तिनीहरूसँग कोरियामा फ्रन्चाइजी स्टोरहरू पनि छन्, र धेरै लोकप्रिय छ। तपाईं तिनीहरू संग गलत हुन सक्दैन।
पछिल्लोटेलिफोन देश कोड। कोरियामा तपाईलाई उनीहरू चाहिन्छ
अर्कोतपाईको कारलाई कोरिया भाग १ मा कसरी पठाउने
कोरिया, बिजुली, प्लग, सकेट र भोल्टेज
डिसेम्बर 23, 2020
टेलिफोन देश कोड। कोरियामा तपाईलाई उनीहरू चाहिन्छ
तपाईको कारलाई कोरिया भाग १ मा कसरी पठाउने